ZPW-25b anoisa piritsi wokudhinda muchina nokuita omesa cubes - China Sino Mukurumbira
cubes kugadzira muchina
zvihwitsi muchirugu wrapping machines
cubes piritsi kudzvanya muchina
upfu vaiitawo Machine
omesa kuutio muchirugu wrapping Machine
mukaka kuutio dzaFord
chokoreti kuravira mukaka kuutio dzaFord
zvakanaka kuravira mukaka kuutio dzaFord
Vanilla kuravira mukaka kuutio dzaFord
omesa kuutio dzaFord
10g omesa kuutio dzaFord
4g omesa kuutio dzaFord
10g huku bouillon kuutio dzaFord
Vhura pfungwa purojekiti bouillon kuutio dzaFord
4g nyama bouillon kuutio dzaFord
4g omesa kuutio muchirugu wrapping Machine
ZGH-350 High nokukurumidza chisanganiso Machine
10g peta vachivhara muchina pamwe nokuronga mudziyo
ZPW-25b anoisa piritsi wokudhinda muchina nokuita seasoni ...
zvihwitsi kuutio divi chisimbiso muchirugu wrapping Machine
ZPW-25b anoisa piritsi wokudhinda muchina nokuita omesa cubes
Rinoshanda: zvihwitsi kuutio muchirugu wrapping Machine
Date makurukuriro: 35 kushanda mazuva
Condition: New Place pamusoro Origin: Shanghai, China (Mainland) Brand Name: ZMD
Type: Michina Tablet Press Voltage 220V / 380V Certification: ISO9001
Material: Simbi isina ngura divi: 920 * 890 * 1540 mm
Pashure-okutengesa Service Kunopiwa: Mainjiniya kuwanikwa basa
mhando ZP WB-19d
Anofa 19 Sets
Max. Dhayamita kuti Table 40mm
Max. Hwakadzama zadza 25mm
Max.Thickness pamusoro Table 12m
Turret Speed 18r / Maminitsi
Motor simba 3kw
1.Easy kuisa, kushandiswa, uye kuramba.
The muchina muviri zvinhu zviri Stainless simbi pamwe high quality.
The muchina Kushandiswa zvokuchunisa kudzora izvo zvinoita muchina esay kushandisa uye basa okuponesa.
2.Automatically tenderera maitiro.
Kumhanya ari turntable, ukuru nokuzadza zvinhu uye pakukora mahwendefa zvinogona kugadziridzwa. Vachikwanisa zvinogona kugadziridzwa sezvo kwenyu.
3.Excellent chaitwa, mukuru kushanda zvakanaka uye yauinayo kukuru.
The Max inokwana muchina uyu anogona kuva 54000pcs / h, izvo zvinoreva unogona kupora mutengo yako pfupi uye kuti purofiti nokukurumidza.
4.Large kumanikidzwa uye yakakwirira nemazvo.
Largest kumanikidzwa kusvika 100kn, zvikuru dhayamita mahwendefa anosvika 40mm, izvo zvinoreva bouillon cubes kana zvimwe cubes zvinoitwa kwedu piritsi wokudhinda muchina vane unhu zvikuru. Somugumisiro, unogona kukunda rudo rwenyu tsika uye nokukurumidza vawedzere musika.
Kusvibiswa 5.No, hapana kutambisa mbishi zvinhu.
The muchina inogona vachiwirirana aine upfu rokutora bhokisi, iro rinogona rwezvinhu guruva kunotangira muchina, ipapo guruva inogona zvishandiswezve.
Chinhu basa redu
1) Tinogona kupa mabasa ose naro, basa uye kurovedza.
2) Tinogona kupa kugadzirwa michina kuti vatengi zvedu, sezvinoita nzira
3) rimwe gore garandi
Bouillon kuutio Hwendefa wokudhinda muchina Australia zvikamu
Name : Gravity feeder pamwe Hopper
Material : Stainless simbi
Features : Special magadzirirwo kugara upfu dzinoyerera kupinda achifa. Inogona nemasiraidhi akapendwa turret injini kuti nani unongotaura. Material kuyerera nemauto muhombe vharafu.
Material : Stainless simbi 304
Features: The kutenderera kumhanya turntable iri kugadziridzwa ne VF Zvivako kuburikidza nepfundo mu yemagetsi remadziro. Ukobvu kumanikidzwa uye basa nevamwe kunogona kugadziridzwa noruoko vhiri yakaratidza mirayiridzo.
2.How tinogona nechokwadi pamusoro muchina unhu pashure tikaisa murayiro?
3.We vanotya musingadi titumirei muchina pashure tinotumira iwe mari?
4. Nei tichifanira kusarudza boka rako?
nekuti tiri yakanakisisa mumwe mumunda ichi, uye isuwo tine fekitari kwedu producting bouillon cubes, tinogona kukupa zvakanaka Michina rubatsiro
5.Need mamwe michina mashoko kana mavhidhiyo?
ndapota kutirovera runhare zvakananga
Previous: ZPW-23b anoisa piritsi wokudhinda muchina nokuita omesa cubes
Next: 4g peta vachivhara muchina pamwe nokuronga mudziyo
Automatic powder Cube Kuenderera Machine
muto Cube Press Machine
Cheap Tablet Michina Press Machine
Cubes Tablet Kuenderera Machine
Full Automatic Spice Apex Machine
Hanyanisi Spice Cube Machine
Kurongedza Machine For Spice
Michina Tablet Press Machine
Michina Tablet Press Machine Sale
michina Tablet Press Kuita Machine
Spice Cube peta Wrapping Machine
Spice Cube Apex Machine
Spice Cube Press Machine E
Spice Cube Mukudhinda Line
Spice Stock Mukudhinda Line
Spices kurongedza Machine
Stock Cubes Michina Press Machine
Tablet Folding Apex Machine
Tablet Achigadzira Machinery
Tablet Michina Press Machine
Tablet Michina Press Machine Price
Candy kuutio shure Simbiso muchirugu wrapping Machine
ZPW-23b anoisa piritsi wokudhinda muchini nokuita Se ...
Side chisimbiso ukagunzva wrapping muchina pamwe arrangi ...
Omesa kuutio shure Simbiso muchirugu wrapping Machine
More zvibereko Food Processing michina
Sino Mukurumbira Group